Otu esi etinye PyCharm na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Sunday, Jenụwarị 9, 2022 Sunday, November 28, 2021 by Jọshụa James
Wụnye ndabere Python
Nhọrọ 1 - Wụnye PyCharm na Flatpak
Nhọrọ 2 - Wụnye PyCharm na Snapcraft (Snap)
Otu esi ebido PyCharm
PyCharm bụ Python graphical IDE (Integrated Development Environment) ewu ewu n'etiti ndị mmepe Python nwere ọtụtụ ngwa ọrụ dị mkpa dị ka nyocha koodu, nbipu, na ntinye. IDE na-abịa na ahịrị iwu, jikọọ na nchekwa data, mepụta gburugburu ebe obibi, ma jikwaa sistemụ njikwa ụdị gị (Git).
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi etinye PyCharm Community, Ọkachamara ma ọ bụ agụmakwụkwọ, yana Flatpak ma ọ bụ Snapcraft (Snap) na Debian 11 Bullseye.
Iji hụ na IDE nwere ike ibu nke ọma, tinye Python 3. xx ndabara na sistemụ Debian gị. Ọ bụrụ na ị na-eji nsụgharị Python ugbua, enwere ike ịwụ nke a.
Ọdịda ịwụnye ndị a nwere ike imetụta nbudata PyCharm ma ọ bụrụ na ị wụsara wee hụ na njehie ahụ laghachiri wee mee iwu dị n'elu.
Site na ndabara, PyCharm adịghị agụnye na Debian 11 Bullseye repository, yabụ a na-atụ aro ka iji njikwa nrụnye mpụga ka ị nwee ike ịnọgide na-enweta mmelite. Nhọrọ nke mbụ ga-eji Flatpak.
Flatpak na-egosipụta naanị Community na ọkachamara ọ bụghị agụmakwụkwọ. Maka ọtụtụ, a na-atụ aro Ogbe maka ojiji nke mbụ.
Wụnye Ogbe PyCharm:
Wụnye PyCharm Ọkachamara:
Ihe atụ (Ogbe):
Ị ga-amalitegharị PC gị ma ọ bụrụ na akara ngosi ngwa ahụ efunahụ ma ọ bụ ngwa ahụ anaghị ebido oge mbụ!
Iji wepu ụdị Flatpack nke PyCharm, jiri iwu a.
Wepu Ogbe PyCharm:
Wepụ PyCharm Ọkachamara:
Pịnye Y Ọzọkwa Tinye igodo ịga n'ihu na mwepụ nke PyCharm site na iji usoro Flatpak.
Nhọrọ nke abụọ bụ iji njikwa ngwugwu Snap. Ndị ọrụ Debian ga-ama Snapcraft nke ọma, ebe ọ na-egosipụta nke ọma na sistemụ Ubuntu.
Nke mbụ, wụnye Snap n'ihi na ọ naghị abịarute na nke ala dịka na nkesa yiri ya.
Site na ndabara, ekwesịrị ịmalite ọrụ Snap ma gbanye ya na mmalite. Ọ bụrụ na nke a emebeghị, jiri iwu a.
Ọzọ, wụnye PyCharm.
Wụnye PyCharm Educational:
Dịka n'elu, nke a na-agwa gị na arụnyere PyCharm nke ọma yana nọmba ụdị.
Mara, ọ bụrụ na akara ngosi ngwa gị anaghị efu ma malite ngwa gị, leghara iwu a dị n'elu anya.
Ọ bụrụ na ịchọkwaghị itinye PyCharm, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
Wepụ PyCharm Education:
Ugbu a ị nwere onye ahịa PyCharm arụnyere, enwere ike ịme mmalite n'ụzọ abụọ.
Mwepụta Ogbe PyCharm:
Mwepụta PyCharm Ọkachamara:
Mmalite mmụta PyCharm:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > PyCharm. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Oge mbụ ị malitere PyCharm, ị ga-enwe ike ịhụ mmapụta abụọ.
Mmapụta mbụ bụ ụkpụrụ eji eme ihe.
Pịa kwenye bọtịnụ ịnọgide.
Mmapụta nke abụọ na-arịọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkekọrịta data na-amaghị aha iji nyere aka melite ngwa ahụ.
Họrọ nke ọ bụla ka eziga or ọ bụghị izipu na-aga n'ihu.
Ozugbo imepere PyCharm, ị ga-ahụ ihuenyo mbudata nke mbụ.
Ekele, ị rụnyela PyCharm nke ọma.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye PyCharm na desktọpụ Debian 11 Bullseye gị site na iji ụzọ abụọ dị iche iche, nke ị nwere ike ịgbanwe n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji otu njikwa ngwugwu karịa nke ọzọ.
N'ozuzu, ọ bara uru ịwụnye PyCharm ma ọ bụrụ na ị na-emepe emepe nke ukwuu site na iji asụsụ mmemme Python. Ọ bụrụ na ị na-amụ Python, ịkwesighi ịbụ ọkachamara. Ọ ga-enyere gị aka ịghọta nke ọma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị mma karịa aha ọ bụla a ma ama na mpaghara IDE.
Maka ozi ndị ọzọ, gaa na onye ọrụ gọọmentị Akwụkwọ PyCharm.
Otu esi etinye PyCharm IDE na Linux Mint 20
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, PyCharm Mail igodo